Maitiro ekugonesa otomatiki Google Analytics UTM yekutevera muSalesforce Marketing Cloud
Muvhuro, Ndira 17, 2022 Chitatu, Kukadzi 23, 2022 Douglas Karr
Nekumisikidza, Salesforce Marketing Cloud (SFMC) haina kubatanidzwa neGoogle Analytics yekuwedzera UTM yekutevera querystring variables kune yega yega link. Zvinyorwa zvekubatana kweGoogle Analytics zvinowanzonongedza kuGoogle Analytics 360 kubatanidzwa ... ungangoda kutarisa izvi kana iwe uchida chaizvo kutora analytics yako kune inotevera nhanho sezvo ichikubvumidza kubatanidza vatengi saiti kubatikana kubva kuAnalytics 360 mune yako Yekushambadzira Cloud mishumo. . Yekutanga Google Analytics Campaign Tracking yekubatanidza,
Shandisa chishandiso ichi kuvaka yako Google Analytics Campaign URL. Iyo fomu inogonesa URL yako, inosanganisira logic yekuti iine chero kubvunza mukati mayo, uye inowedzera ese akakodzera UTM misiyano: utm_campaign, utm_source, utm_medium, uye sarudzo utm_term uye utm_content. Kana iwe uri kuverenga izvi kuburikidza neRSS kana email, tinya nepano kune saiti kuti ushandise chishandiso: Maitiro Ekutora uye Kuchengeta Campaign Dhata muGoogle Analytics Heino vhidhiyo yakazara pakuronga.
Mugovera, Kukadzi 14, 2009 Mugovera, Kukadzi 20, 2016 Douglas Karr
Vhiki rino kubasa, mumwe wevatengi vedu aibvunza kuti chii "chimwe" traffic sosi muGoogle Analytics (GA). Iko hakuna kunyanya kuwanda mune iyo chaiyo interface yeGoogle Analytics saka iwe unofanirwa kuita kumwe kuchera. Traffic sosi inozivikanwawo senge iri yepakati muGA. Ndakaita zvekuchera ndikaona kuti Google Analytics inotora iyo yepakati otomatiki kune mamwe masvikiro, inonyanya kuzivikanwa kuve email. Kuti uwane iyo rondedzero ye